Lahatsary : India, “Slumdog Millionaire” sy ireo tanàna farahidiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Novambra 2018 12:34 GMT
Ao anatin'ity lahatsoratra ity, tianay ny hampahafantatra an'i Ruchika Muchhala mpandrakitra lahatsary mpanao asa an-tsitrapo, izay manoratra ao amin'ny bilaogy blog Channel 19 (teny anglisy). Ny lahatsoratra farany avy aminy dia milaza momba ny Slumdog Millionaire, sarimihetsika novolavolaina sy notontosaina tao Mumbai, India, izay vao haingana no nahazo ny loka dimy tamin'ireo enina nandritra ny Critics Choice Awards amerikàna, sy loka efatra hafa izay nanendrena azy hofantenana tamin'ny Golden Globe Awards. Niteraka resabe ilay sarimihetsika noho ny fomba nanehoany ny fiainana any amin'ireo tanàna farahidiny ao India sy ny fahombiazana azony tany ivelany.
Tamin'ny Oktobra farany teo, nambaranay ny asa vitan'ny Channel 19 mba hampiroboroboana ny median'ny isambatan'olona sy ny fanofanana ny mponina, tamin'ny alàlan'ny fampiofànana an-dahatsary sy fandefasana sarimihetsika :
Ny Video Volonteers dia fikambanana iray tsy mikatsaka tombony ara-bola, ivondronan'ireo mpamokatra tsy matianina any amin'ireo vohitra sy tanàna tsizarizary ao India, ary mamokatra votoaty haino sy jery miainga avy amin'ny fiainan-dry zareo manokana, avy eo mikarakara fandefasana sarimihetsika any amin'ny faritra rehetra any. Araka izany, an'arivony maro isambolana ny olona no mahazo torohay ary mahita hetsika mahakasika azy ireo sy mitondra azy ireo hihetsika. Alefan'ny Channel 19 ao amin'ny tranonkalany, ho an'ny ambiny ao amin'ny firenena, ireny lahatsary noforonina sy natao ho an'ny vahoaka ireny.
Ruchika manoratra hoe:
Tena tsy nampoiziko marina mihitsy ilay sarimihetsika izay eny am-bavan'ny rehetra amin'izao fotoana izao, ary noho izy notontosaina tao amin'ny toerana tsy lavitra fa 30 minitra monja miala amin'ny toerana onenako ao Mumbai, India. Sarimihetsika feno fahavitrihana tokoa ny Slumdog Millionnaire, misy sehatra mahaliana ary notontosaina manontolo tao amina faritra roa akaikin'ny misy ahy – Dharavi, ilay tanàna farahidiny midadasika indrindra eto ambonin'ny tany, sy Juhu. Tsy dia lavitra loatra ny toerana onenan'ny ankamaroan'ireo mpamokatra tsy matianina avy amin'ny Channel 19 ireo faritra ireo, ny sasany aza toa Venkatesh mihitsy, miaina any amin'ny iray amin'ireo faritra roa ireo!
Marihan'i Ruchika ihany koa hoe zoro mahaliana toy ny ahoana no amaritana ny fireneny :
…Ela ny ela, inty ny sarimihetsika iray tsy mandokandoka ireo vohitra ao amin'ny farany lalina ao India ho toy ny toerana «tsara tsy fahita firy», no sady tsy mampiseho ireo ankosotra sy zavatra atentina izay tsy mahakasika afa-tsy ampahany kely dia kely amin'ireo indiàna mpanarivo, nefa nofinofisin'ny rehetra. Etsy andaniny, asehon'io sarimihetsika io ny atao hoe India maoderina, ilay tena izy, amin'ny alàlan'ny famaritana ny fiainana any amin'ireo tanàna farahidiny sy amin'ny firesahana ary fiasàna miaraka amin'ireo mponina any amin'ireny faritra mampalahelo ireny, fa tsy hoe manakaràma mpilalao an-tsehatra sy mpikaroka. .
Namokatra lahatsary iray nanasàny ireo mponina tany amin'ireo tanàna farahidiny mba hihetsika ny Channel 19:
Ohatra iray tsara mihitsy ilay lahatsary miresaka ny fomba fiainana any anatin'ilay tanàna farahidiny ao Ahmedabad, tanàna iray hafa lehibe ao India. Nampiasain'ireo mpamokatra tsy matianina avy amin'ny Samvad CVU (Saath Video Unit) io sarimihetsika io mba hampahafantarana ireo mponina any amin'ireo tanàna farahidiny ny momba ireo fitaovana azo ampiasaina hitakiana amin'ny governemanta mba hiroso aminà fanatsaràna itofony, toy ny fametrahana toerana fidiovana !
Kanefa, hita ho tsy mahafaly ny sasany ny fomba nataon'ny Slumdog Millionnaire namaritana ny fahantràna. Tao Patna, India, nametrahan'i Tapeshwar Vishwakarma, sekreteran'ny Kaomitin'ny hetsika iraisan'ireo mponin'ny tanàna farahidiny, fitoriana ilay mpilalao sarimihetsika Anil Kapoor sy ny A R Rahman, Talen'ny mozika. Tetsy andaniny, novalian'i Amitabh Bachchan, ilay kintan'i Bollywood, tao amin'ny bilaoginy kosa ireo mpanenjika an'ilay sarimihetsika :
Manesika ahy hilaza izao zavatra manaraka izao ireo fanehoankevitra nivoaka tao amin'ny bilaogy momba ilay sarimihetsika SlumDog Millionnaire (SM) sy ireo hatezerana hita any anatin'ny sasany amin'izy ireny. Raha toa ny SM mandoko an'i India ho firenena iray mahantra an-dalampandrosoana, maloto sy osa, ary manainga fanaintainana sy rikoriko eny anivon'ireo (Indiàna) mpandala ny firenena sy tia tanindrazana, tsy maintsy fantarina ny hoe misy ireo zavatra maitso manopy manga sy mainty ary mitombo, na dia eo anivon'ireo firenena efa tena mandroso aza. Fa fotsiny, ny fiheverana ny hoe Indiana no nanoratra ny SM, avy eo namboarin'ny Tandrefana iray hifanaraka sy notontosainy ho an'ny sarimihetsika, dia avy eo ilay izy nahazo fankatoavana / fankasitrahana avy amin'ireo mpamokatra erantany. Mety tsy ho izay no zavanisy raha zavatra hafa no nitondràna azy.
Na ho inona na ho inona, nitatra toy ny vainafo nipitika io fanehoankevitra io ary, tafavoaka tamin'ny faritra tokony hisy azy, niteraka lohateny vaventy teny anatin'ireo gazety indiàna, izay nanambara fa hoe toherin'i Amitabh Bachchan ilay sarimihetsika. Nezahan'ilehio izay hampihemorana ireo media tamin'ny fikasàny hanaisotra ireo tsy fifankahazoan-dresaka tao anatin'ny bilaoginy, tamin'ny famoahana taratasy misokatra iray nalefa ho an'ireo gazety goavana, Hoy izy ao anatiny:
Nanantena hahazo hevitra avy amin'ireo mpamaky ahy aho, ary dia mba hahalala zavatra avy amin'izany avy eo. Tsy misy nifandraisany mihitsy tamin'ireny nampiasa loha ireny ireo lahatsoratra navoakan'ny Guardian
Mahatalanjona hatrany ireo vahiny ny fiainana any amin'ireo tanàna farahidiny, vahiny izay vonona mihitsy aza ny handoa vola handeha hitsidika an'i Dharavi, ilay tanàna farahidiny midadasika indrindra ao Azia, toy ny efa nilazànay azy tamin'ny 2006 tao anatin'ny India : Poorism, Tourism and the Western Tourist (India : fahantràna, fizahantany ary tandrefana mpizahatany)
Ity antsafa noraketina ho anaty lahatsary ity, notontosain'i Ipperkins63 no manampy hahatakatra ny antony mety hisafidianan'ny fianakaviana iray hipetraka any amin'ny tanàna iray farahidiny. Ohatra, hazavain'ireo mpikambana ao aminy fa tsy nisy ravimbola taratasy ao amin'ilay vohitra onenan-dry zareo. Ny fitadiavana asa handraisana karama sy ny fanantenana hoavy tsara kokoa ho an'ny taranany no nitondra azy ireo ho ao Mumbai.